Shirkadaha Hotel ee Sri Lanka waxay u qalantaa inay shaqo bilaabaan dibadda
Published by Shirkadda Dubai City at April 21, 2018
Shirkadaha Hotel ee Sri Lanka
Shaqooyinka hoteelka ee Sri Lanka la Shirkadda Dubai City. Waxaan nahay hadda ka caawinta helitaanka shaqo Sri Lanka. Waxaan hadda la shaqeyneynaa dhowr shirkadood oo Sri Lanka ah. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaynu eegaynaa horey u soo qaadashada CV. Gaar ahaan dadka shaqo doonka ah ee cusub ee Sri Lanka. Shirkadeena waxay maamushaa qandaraasyo dhowr ah oo leh shirkado ku saleysan Asia.
Helitaanka shaqo Sri Lanka waxay noqon kartaa caqabad, gaar ahaan ajnabiga. Shirkaddeenuna waxay eegi doontaa shaqooyin ee Sri Lanka. The Dubai Shirkadda Magaalada hagaha shaqada ee dadka ajnabiga ah. Dhab ahaan waxay bixisaa macluumaad ku saabsan raadinta shaqo ee Aasiya iyo Bariga Dhexe. Gaar ahaan waxaan isku dayeynaa inaan ku hagaajino shaqooyinka huteel ee Sri Lanka. Shaqooyinka internetka ee Srilanka iyo sida loo helo hab ku habboon. Iyo shaqooyinka waqti-dhimman, sidoo kale waxan qoraynaa shaqooyinka ugu sareeya Heshiiska Sri Lanka iyo xaaladaha shaqada.
Shaqooyinka banaan ee Sri Lanka, waa inaad fiirisaa ilaha kala duwan. Laga soo bilaabo shabakada internetka halkaas oo aad ka heli karto shaqooyinka online ee Sri Lanka boosaska la heli karo. Ama xitaa xayeysiis CV-ga ah asalkaaga. dhanka kale, haddii aad raadineyso shaqooyin waqti Sri Lanka ah. Waa inaad waydiiso su'aalaha iyo inaad la wadaagto khibradaada shaqaale kale ee shaqo doonka ah ee ka jira goobaha raadinta xirfadaha deegaanka iyo Isku day in aad dalbato waraysiyada socodsiinta.
Shirkadda Dubai City ee shaqaalaha Sri Lanka
Ama waxaa laga yaabaa in aad tahay dalxiis? Waxaad raadineysaa inaad ku noolaato oo aad ka shaqeyso Aasiya. Sri Lanka, waxaad xitaa ka shaqeyn kartaa wakhti wakhti go'an iyo daraasad. Shirkadeena Waxay kaa caawineysaa inaad maareyso shaqo raadinta maalin kasta Sri Lanka. Dubai City Tilmaanta shirkaddu waa tan ugu wanaagsan ee shaqaalaha maxalliga ah ee Sri Lankan. Oo aad u qiimo badan oo loogu talagalay dadka raadinaya shaqo Dubai laga bilaabo Srilanka. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa la ogaanayaa. Waa hudheelka hotelka ee Sri Lanka adiga?
Xirfadeena hagaha shaqaaluhu waxay dabooli doonaan mowduucyada sida loo helo fiisooyinka. Sida loo helo guryaha ku habboon Aasiya. Shaqooyinka maaliyadeed sida shaqooyinka bannaan ee Bangiga Sri Lanka. Fadlan ku soo biir bulshada beesha Dubai City si aad shaqo u raadsato. Iyo inaad la xiriirto dadka adiga oo kale. Shaqo ka raadso shirkadeena, lana wadaagno khibradaada shaqooyinka hotelka ee Sri Lanka.
Guudmarka shaqada ee Sri Lanka
Sidee ay tahay in ay ku noolaadaan oo ka shaqeeyaan Sri Lanka? Markaad raadineyso shaqooyinka Sri Lanka. Waa inaad ogaataa in ay jiraan shaqo la'aan badan oo shaqo la'aan ah. Sidaas darteed dadka waddankaan ka raadsanaya shaqo dibedda. Dhinaca kale, qof kastaa ma helo shaqo. Sidaa darteed dadka isku dayaya in ay helaan waxbarasho ka fiican, koorsooyin ka fiican. Sida xaqiiqda ah, xaaladaha badankood, ma caawineyso wax badan.
Inta badan dadka shaqo doonka ah ee degaanka ah ayaa ka warqabaya taas. Dhibaato ha ahaato sida wanaagsan ee khibradaada ay noqon doonto. Waxaad maamuli doontaa codsigaaga shaqaale kale oo badan oo Sri Lankans ah. Dhinaca xun ee dad badan oo leh khibrad wanaagsan Asia. Badanaa waa shaqo la'aan, sidaas awgeed waa raadinta xirfado wanaagsan oo Srilanka ah ama ka shaqeeya debedda. Sidoo kale, waxaa jira tiro sii kordhaysa ee qalinjabiyeyaal degaanka ah kuwaas oo raadinaya shaqooyinka ugu sarreeya ee Sri Lanka. Sidaas, xitaa dalkan waa cajiib ah xirfad Sri Lanka waxaa si fiican loogu bixiyaa fursad sax ah.
Dalkani wali waa mid sii koraya meel waayo, ganacsi. Waxaad ka heli kartaa qaar shaqooyinka xiisaha leh. Sida laga soo xigtay Dawladda Sri Lanka, waxaa jira meel bannaan oo ganacsi ah. Tusaale ahaan, 2018 waxay ku qiyaasteen 9.7 million dadka ku habboon inay shaqeeyaan. Dadka shaqo doonka ah ee ugu muhiimsan waxay weli sii wadaan shaqaale maxaliga ah. Suurtogalka weyn ee Sri Lankan ah sida xoogga shaqaale ee dhaqaalaha Sri Lanka. Dhinaca dhinaca wanaagsan, wax ka badan 90% dadka ayaa horeba u shaqaaleysnaa. Dadka intiisa kale waa shaqo la'aan ama weli waxbartaa. Dhinaca kale, heerka shaqo la'aanta ee Sri Lanka wuxuu ka yar yahay 4.20 boqolkiiba sanadka 2018.
Ka shaqeynta shirkadaha Sri Lanka
Wadankan sidoo kale wuxuu lahaa xag dhaqaale ahaanba dhaqaalaha. Sababtan awgeed, shirkado badan oo maareynaya mashaariicda cusub sanado kahor. Oo waxay bilaabayaan inay ka shaqeeyaan sanadka 2000. Marka shaqa la'aanta ay ku dhawaad ​​sideed boqolkiiba. Kadibna waxay ogaanayaan siyaabo wanaagsan oo wax looga qaban karo. Dhinaca kale, Sri Lanka weli wakhti adag ayey ku shaqeyneysaa dadkooda hooyo. Sidaas awgeed waa sababta ay u xadidan yihiin qaar fursadaha shaqo ee loogu talagalay ajaanibta dhowaan yimid.
Shaqo ka raadso Sri Lanka shaqaale caalami ah. Waxaa laga yaabaa in hawlo aad u adag ay sameeyaan, laakiin dhab ahaantii maaha wax aan macquul aheyn. Tusaale ahaan, Dadka ajnebiga ah ee Hindiya ayaa shaqo ka helaya dalkan si fudud. Si kale loo dhigo, waad ka shaqeyn kartaa Sri Lanka dhamaan fursadaha tabaruc ahaan. Waxaa jira dhowr dalab, tusaale ahaan, waad awoodaa baro Ingiriis. Caddayn badan oo qasab ah oo muujinaya inaad waxbadan qabanayso. Intii aan u shaqeynayay shirkad caalami ah.
Dhibaatada Sri Lanka
Muhiim u ah in la ogaado taas qurbajoogta ajnabiga ah. Gaar ahaan xagga xirfadaha maaraynta iyo khibradaha Bariga Dhexe ama Europe. Hubaashii waa bilow fursadaha xirfadaha badankooda sida ugu dhakhsaha badan. Dhinaca xun, shaqooyinka Sri Lanka aad ayay ugu wanaagsan yihiin maamulayaasha. Ugu horreyntii, fursadda ah in la helo shaqo this Sri Lanka waa ka sareeya. Dhanka kale, waxay ka fiican yihiin.
Waxaa jira dhowr Shirkadaha Sri Lanka in aad bilaabi karto xirfad. Dabcan, Sri Lanka waa meel aad u fiican dalxiisayaasha. Marka loo eego duruufahaas, waxaa habboon in la dalbado shaqooyinka huteelka ee Sri Lanka. Iyadoo ujeedkani inta badan dadka codsanaya maareynta maareynta. Inta badan, dad badan ayaa raba xitaa Dubai. Haysashada si aad shaqo ugu hesho qaybaha ammaanka gaarka ah sida sida martigelinta iyo dalxiiska. Dabcan, waxaad raadin kartaa shaqo ganacsiga iyo ganacsiga warshadaha. Sidoo kale shaqooyinka wanaagsan waxaad ka heli kartaa dhammaan xiriirrada macaamilka. Qaybaha hoose waa injineernimada, maaliyadda iyo dhar-dhaqashada, iyo dharka.
Nolosha iyo mushaaraadka Sri Lanka
Heerka nolosha ee wadankan waa wanaagsan ku filan dadka maxalliga ah. Laakiin maskaxda ku hay in mushaharka uu hoos ugu dhici doono Sri Lanka. Xitaa haddii aad shaqo ka hesho shirkad tiknoolajiyadeed oo Sri Lanka ah. Waxaad filan kartaa lacag aad u badan oo kuugu jirta xisaabtaada bangiga. Tusaale ahaan, haddii aan isbarbardhigo Dubai iyo London.
Markaa ha barbar dhigin dalalka reer galbeedka. Sababtoo ah waa suuq shaqo oo ka duwan haddii aan isku barbardhigo Dubai ama Abu Dhabi. Dhanka kale, lacagta ma aha mid xun. Waxaad shaqo ku heli kartaa adigoo ah madaxa sare. Tusaale ahaan warshadaha hoteelka. Oo hubaal sidan ayaad u samayn doontaa wax badan.
Laga yaabee inaadan awoodin inaad lacag ku kaydsato sidii Sri Lanka u shaqeyn lahaa. Shirkadda magaalada Dubai waxay dib u eegis ku samaysay shaqooyinka Srilanka. Iyo warbixinteena shaqo ee Sri Lanka. Waa in aad ogow sida loo helo shaqo Aasiya. Iyo gaar ahaan dalka Sri Lanka.
Shaqada goobta shaqada ee Sri Lanka
Markaad shaqo bilowdo. Dhab ahaan, mushaharkaagu waa inuu daboolaa hab nololeed raaxo leh. Lahaanshaha guri fiican iyo baabuur wanaagsan. The shirkadda ugu fiican ayaa shaqaaleysiinaysa wadankan.
Iyo qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha maxaliga ah ee helaya shaqadan. Sababtoo ah kharashka ku baxa Sri Lanka. Waa meel aad u fiican oo aad ku noolaato oo guud ahaan aad u weyn meel fiican oo laguu kiraysan karo. Hindiya ayaa aad uga fudud si aad shaqo u hesho gudaha Sri Lanka marka loo eego meelaha kale. Dhinaca wanaagsan, waxaad sidoo kale awoodi kartaa inaad shaqo ka hesho Sri Lanka fursado shaqo oo wanaagsan. Tusaale ahaan hay'adaha caalamiga ah. Iyo inta badan ururka weyn oo bixiya a mushahar sare oo ajnabi ah, oo ka soo horjeeda mushahar hooseeya.
Shaqooyinka Sri Lanka ma jiraan? Bilaw shaqo ee Dubai
Dhanka kale, haddii aad ku nooshahay Sri Lanka waad awoodaa shaqo hel gudaha Dubai. Naga Shirkadda caawinta shaqo doonka si aad u hesho Shaqooyin ka yimid Sri Lanka ee Dubai. Our nidaamka shaqo raadinta waxaa si weyn lagula talinayaa dadka ka socda Sri Lanka. Waxaan dadka ka caawinaynaa inay shaqo ka helaan dalka Isutagga Imaaraatka Emirates. Inta badan shaqo doonka shirkadaheena ay ka soo jeedaan India. Laakiin sidoo kale waxaan gacan ka geysaneynaa sidii aan shaqo uga heli laheyn Dubai ugaadhsi u helidda shaqo doonka.
Haddii aad tahay raadinta xirfad ku dhisan Dubai sida Hindiya. Arab Carabta waxay leedahay boosaska furan ee adiga kugu habboon. Waxaan ka caawinaynaa dadka adduunka oo idil si ay shaqo uga hesho Imaaraadka Carabta. Gaar ahaan dadka u raadinaya shaqo ee Abu Dhabi, Dubai, iyo Sharjah. Sidaas darteed haddii aad ka timid Sri Lanka waxaan awoodnaa inaanu u qabano shaqo wanaagsan Dubai. Kooxdayada hore guulaysiga dadka Pakistan iyo Hindiya. Sidaas darteed maskaxda ku haysa, kooxdayadu waxay rajaynaysaa inay kugusoo fidiso. Dhammaanteen waxaan kaa rabnaa waa arji shaqo buuxda. Sidaas darteed haddii aad awooddo fadlan qor faahfaahintaada at our soo iibinta resume qaybta.
Dhanka kale, waxaad ku dari kartaa lambarkaaga taleefanka anaga WhatsApp kooxaha shaqooyinka. Iyo shirkadeena oo ka qaadaneysa codsi shaqo qoris ah macaamiisheenna. Ka dib ku dheji websaydhka warbaahinta bulshada, iyo Kooxaha WhatsApp. Markaa waa mid kale habka ugu wanaagsan ee loo heli karo shaqooyinka Dubai iyo Abu Dhabi. Sida xaqiiqda ah, waxaanu caawinaa dadka in ay bilaabaan xirfad ku yaalo Imaaraadka Carabta.
Maxay Xirfadlayaashu ka Doortaan?
Xirfadaha Hoteelka ee Sri Lanka
Midkee Wanaag Kuugu Yihiin?
Qalabka shaqada ee Sri Lanka
Su'aalaha ugu adag ee ay tahay inaad isweydiiso. Waa maxay shaqadeyda iigu fiican hudheel mihnada ayaa ii fiican?. Sababtoo ah labadan waaxood ayaa ugu weyn shaqada Sri Lanka. Waqtiyada qaar, waa inaad isweydiisaa naftaada noocee ah shaqada iigu fiican? Xitaa ma ka dhigi karaa inay taasi dhacdo ?. Qofka cusub ee mustaqbal leh tani waa inay noqotaa mid aad u muhiim ah. Sababta oo ah jawaabta su’aashan ayaa ah beddela ugu weyn ee noloshaada. Iyo goorta aad go aansato waxa igu habboon. Sideen ku bilaabayaa?
Laakiin inta badan dadka shaqo doonka ah, habka shaqo raadinta ma aha taasi mid cad. Badi fresher-ku waa inuu bilow shaqo raadin inta lagu gudajiro sannadaha dugsiga sare. Sidoo kale, habka ugu wanaagsan waa in la raaco rabitaanka dabiiciga ah. Tan iyo markii aad bilowdey inaad ogaato damacyadaada. Waa in lagu kula kulmo dadka kale ee khibrada u leh. Qaarkood waxay runtii kaa caawin karaan inaad daahfurto fursadaha shaqada. Taasi waxay noqon kartaa qoyskaaga ama qof kale oo waayo aragnimo weyn leh.
Waa maxay xulashada xirfadda ugu fiican?
Xaqiiqdii, hadaad shaqo raadineyso. Waa in lagu gaadhaa shaqada ugu horreysa ee aad loo diyaariyey. Waan ognahay in shaqada hudheelku ay tahay shaqo adag in la go’aamiyo. Weligaa ma ogaan kartid waxa kuu fiicnaan kara adiga. Laakiin inta badan kulliyadda ama aqlabiyadda jaamacadda. Diyaarinta shaqada guud, ee maaha shaqo gaar ah. Laakiin tan maskaxda lagu hayo, xulashada xirfadda ma dhamaanayso. Tan iyo markii aad heshay shahaadada kulliyadda ama jaamacadda. Darajooyin wanaagsan, waxaad yeelan kartaa mid ka mid ah shaqooyin runtii aan u fidinay dadka shaqo doonka ah.
Isku day inaad garato waxaaga habka xulashada xirfadaha. Kahor intaadan go'aan ka gaarin shaqada Sri Lanka aad jeclaan lahayd inaad ka hesho. Sababtoo ah qalin jabiyayaal cusub iyagoo raadinaya inay bilaabaan shaqo saameyn sare leh. Dhammaan xoogagga ka soo gala waddankan waxay waliba sahamin doonaan fursado shaqo oo kala duwan. Raadi shaqaaleynta shaqooyinka huteel ee Sri Lanka oo leh shirkadda Dubai City.
Shaqooyinka Hotel ee Sri Lanka
Warshadaha Srilanka waa ganacsi weyn. Waxaa jira hudheelo badan oo ku yaal wadankan. Waxaad heli kartaa shaqo booska iibka. Laakiin mid ka mid ah shaqooyinka ugu fiican Srilanka waa maareynta maareynta. Sababtoo ah haddii aan ka qaadan doonno shaqo dalkan ka timid. Hadana, sii wad inaad ku noolaato Srilanka runti ku noolaanshaha jannada waa hab wanaagsan oo lagu maareeyo. Srilanka, annagu waxaan nahay yeelashada astaan ​​sare oo lala shaqeeyo. Inta badan hoteellada ayaa ah shaqaalaynta. Waxaa jira ikhtiyaar shaqaaleynta weyn ee dadka maxalliga ah. Laga soo bilaabo aasaas ahaan shaqaalaha tababarka ilaa jagooyinka maamulka sare. Waxaas oo dhan waad ka heli kartaa adigoo ka shaqeynaya warshadaha hoteelka Srilankan.
Shirkadda Dubai City waxay la shaqeyneysaa shirkado badan oo ka shaqeeya goobo hoteel ah oo ku yaal Sri Lanka. Gaar ahaan kuwa ka socda Hotel Industries. Dhinaca kale, haddii aanad shaqo ku heli karin. Shirkaddayadu waxay samaysay baadhitaan aad u wanaagsan oo loogu talagalay hoteelka shaqaaleynta shirkadaha gudaha Sri Lanka. Waa inaad fiirisaa waxa ay shirkadaha warshadaha hoteelku ku shaqaaleeyaan Sri Lanka. Kooxdayadu sidoo kale way ka badnaan doonaan waan ku faraxsanahay hadaad shaqo hesho gudaha Sri Lanka. Bal eeg tilmaamahayaga ku saabsan sida shaqo looga helo hudheel ku yaal Sri Lanka.
Raadi shaqaaleynta shaqooyinka huteel ee Sri Lanka.
Shaqooyinka Jetwing Hotels ee Sri Lanka
Hoteellada Jetwing ee ku yaal Sri Lanka waa meesha ugu horeysa ee shaqada laga shaqeeyo. Shirkadani waxay shaqaaleysiinaysaa maamulayaal badan oo cusub. Waxaad shirkad ka bilaabi kartaa wax-soo-saarka Sri Lanka. Mid ka mid ah hudheelka ugu wanaagsan ee xirfad abaalgud ku leh warshadaha horumarsan ee Sri Lanka.
Haddii aad tahay raadinaysa dhakhso u koraan. Waa inaad tixgelisaa hudheelka garabka Jet ee meheraddaada. Hoteellada Jetwing ayaa leh qayb ka mid ah waaxda dalxiiska ee jasiiradda. Dhanka kale kharash badan oo cusub oo ku dhufanaya shirkadan.
Sababta oo ah iyaga oo leh waxaad ka heli kartaa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha iyo fursadaha. Intaad la shaqeyn doonto yaabab dabiici ah, la kulan dad ka kala yimid adduunka oo lacag wanaagsan samee. Haddii tani tahay bartilmaameedkaaga ?. Shirkadda, waxaad weligaa dhiirigelin doontaa. Mid ka mid ah huteellada adduunka ugu fiican. Waxaa intaa dheer, Srilanka, hudheelkan ayaa caan ku ahaa muddo dheer bay'ada shaqada. Iyo mid ka mid ah xirfadaha ugu wanaagsan ee dalxiis iyo soo-dhaweyn.
Jetwing Hotels, waxay ka sharaf badan tahay hoyga martigelinta Sri Lankan. Jetwing Hotels waa caawinta ardayda cusub ee qalin jabisay. Sababtoo ah waxay aamminsan yihiin muhiimadda ay leedahay taageerida xubin kasta oo cusub oo qalin-jabiya. The horumarka shaqo iyo Barnaamijka Horumarinta shirkaddan ayaa mudan in la bilaabo. Shirkadani waxay runtii saameyn ku yeelan doontaa shaqooyinka Sri Lanka.
Hotel Shaqooyinka ee Cinnamon Sri Lanka
Hoteelka qorfe cinneedka wuxuu leeyahay joogitaan xoogan oo gobolka ah. Ajnabi badan ayaa shaqeeya oo leh astaantiisa. Shaqooyinka Sri Lanka, hudheelkani wuxuu umuuqdaa mid fikrad caqli gal ah. Shirkadda horumarinta mashaariic badan oo cusub. Dhanka kale, maamulka shirkadan ee maareyneysa boorsooyin ay kujirto maal gashi aad u sareeya. Waxay la shaqeynayaan wax kabadan fasalada 2400 xiddigood iyo wixii kabadan ee 40 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan hoteelada.
Guud ahaan, marka laga hadlayo, shirkadda raadineysa inay u waddo ganacsi ballaarin waara. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kharashyo cusub ayaa la dhigi karaa. Markaa haddii aad u xiisaynayso ka shaqaynta Sri Lanka. Gaar ahaan warshadaha soo-dhaweynta. Waa inaad sameysaa meheraddaada leh Cinnamon Hotels & Resorts. Sababtoo ah waxay hogaaminayaan warshadaha.
Hoteelka ayaa nooca nolosha sumadda shaqooyinka Sri Lanka. In kasta oo aad la shaqeyn doontid waxaad u baahan doontaa inaad gaarsiiso waaya-aragnimada Aasiya casriga ah. Shaqooyinka hudheelka ee Sri Lanka oo ay la jirto shirkadani waa mid wanaagsan.
Ururkan, ahmiyada koowaad waxay saaran tahay shaqaalaha. Markaa haddii aad rabto inaad ku raaxaysato meheradda nolosha ee Sri Lanka. Waa inaad isku daydaa inaad gasho shirkaddan.
Huteelkan, dhanka kale, saameyn adag ku leh Aasiya. Marka waxay yaqaanaan sida loo soo jiito murashaxiinta imaan kara adduunka oo dhan. Intaad xirfad ka bilaabayso hudheelka qorfe, waxaad u baahan doontaa inaad aragti wadaag la wadaagto qorfe. Kooxdayada Kala talinta shaqo-dooneyaasha cusub ee dalbanaya shaqada iyaga waxaa la jiray.
Xirfad ku jirta Mawduuca Guriga & Spa
Srilanka, had iyo jeer way jirtaa meel loogu talagalay dadka aan caadiga ahayn. Gaar ahaan warshadaha hoteelka. Haddii aad ka mid tahay iyaga oo shaqo raadinaya. Waa inaad ugu hibeysaa adeeggaaga xirfadeed 'Theme Resort & Spa'. Gaar ahaan haddii aad tahay shaqaale ku jihaysan iibka.
Mowduuca dalxiiska & Isboortiga. Warshadaha aqoonta Theme ayaa fure u ah dhammaystirka. Haddii aad aqoon adag u leedahay warshadaha hoteelka. Ka codso CV-gaaga cusboonaysiinta. Intaa waxaa sii dheer, dadka xiisaha u qaba inay u adeegaan dadka kale ayaa laga door bidaa bartaan. Shirkadan waxay sare u qaaddaa guulo la gaarey. Hadana haddii aad siiso boqolkiiba boqol iyaga. Waa laguugu abaalgudi doonaa, dareen kasta oo ereygaas ah.
Xaqiiq ahaan, iyagu bixi caawimaad xirfadeed oo dhammaystiran. Laga soo bilaabo tababarka shaqada iyo la talinta ilaa tababarka maamulka sare. Laakiin kuwa doonaya inay gaaraan xitaa sare shaqadooda. Karaa ka dalbaan boosaska shaqooyinka jaangoynta c ee mareegtooda.
Fahmitaanka iyo dhiiri-gelinta kuwa kale ee howsha kala duwan leh. Iyada oo shirkadani bixinayso lacag gooni ah. Tan iyo markii aan mid walba qofku wuxuu muujiyaa fikirka iyo adeegsiga macaamiisha. Waxaad awood sare ku yeelan kartaa shaqaalaha Rthe esort. Aad bay ugu wanaagsan yihiin shaqooyinka hoteellada Sri Lanka.
Shaqada leh Mount Lavina Hotel
Hoteelka Mount Lavina yeelashada dhaqan adag gudaha Sri Lanka. Haddii aad shaqo ka raadinayso gudaha warshadaha hoteelka Mount Lavinia Hotel waa xulasho wanaagsan. Huteelkan ayaa caan ku ah dhaxalka dhaxal galkiisa gumeysi. Waxaa intaa dheer, waxaa jira dad aad u badan oo la yaab leh kuwaas oo ku nool Sri Lanka oo la shaqeeya sumadan. Marka, haddii aad raadinayso xirfad horumarineed oo xoog leh. Waxaad ka mid noqon kartaa kooxdeeda xubno ka noqdaan oo noqda shaqaale go'an.
Dhinaca taban, waxaad ubaahantahay inaad leedahay awood dhab ah howlaha hoteelka. Hoteelka Mount Lavina, waxay ka dhigeen hoteelka mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Sri Lanka. Maamulka hudheelka ayaa aaminsan inay leedahay tiro badan masuuliyada dhanka iyaga. Marka wax walbaa waxay ubaahanyihiin inay meesha yaalaan, ayadoon loo eegayn waxa hada ka socda hoteelka. Wax walba waa inay ahaadaan meesha iyo qof walba waa inuu si adag ugu shaqeeyaa si uu u sii wado shaqada heer hoteel.
Falsafada hudheelka ugu weyn ayaa lagu saleeyay tababarka shaqaalahooda. Guud ahaan si looga hadlo Jidka wanaagsan ee macaamiishooda. Intooda badan shaqaalahooda ayaa rumeysan in suurta galnimada hoteelka ay tahay waxa ugu weyn. Dhanka taban, the Tababaraha kooxda's abuurista kooxdooda. Waxyaabo badan lama hagaajin karo. Qofkastoo shaqaale ah oo ka tirsan shirkadan, tababar cusub ayaa la bixin doonaad. Tan iyo markii aad ku biirtay kooxda wax badan ayaad iyaga siin doontaa. Laakiin waxaad iyaga ka filan kartaa in xubno cusub ay ballaarin doonaan waxyaabaha aad ka rajeynaysid. Shirkad aad u fiican oo loogu talagalay shaqooyinka hotelka ee Sri Lanka.
Gabagabaynta Sri Lanka Xirfadaha Hotel
Wax alla wixii tababaro ah iyo dadaal ah oo aad ubaahantahay inaad sameyso Shaqooyinka hoteellada Sri Lanka waa hubaal wanaajinta tayada noloshaada. Gaar ahaan haddii aad raadineyso shaqo waqti dheer ah Sri Lanka. Warshadaha hudheelka oo bixiya fursado cajiib ah. Tusaale ahaan, waxaad noqon kartaa qof qurbe joog ah hal maalin. Waxaad ku bilaabi kartaa meherad Sri Lanka, laakiin waad ku dhammaan kartaa dhab ahaantii meel qabow sida Dubai ama Abu Dhabi ee United Arab Emirates. Ka biloow Shaqooyinka Hoteelka ee Sri Lanka shirkadayada.
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa tilmaamo wanaagsan ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga shaqaalaha iyo kharashyada. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hadda waad heli kartaa hagayaal, talooyin iyo shaqo ee Imaaraadka Carabta ee Imaaraadka kula leh luqaddaada.